Meram Son Durak wuxuu yeelan doonaa muuqaal gebi ahaanba ka duwan | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Central Anatolia42 KonyaMeram Sonak Duraku Si Aan U Noqon Karin Jiilalka Kale
19 / 09 / 2017 42 Konya, Gobolka Central Anatolia, GUUD, TELPHER
Mid ka mid ah meelaha ugu muhiimsan dalxiiska ee Konya Meram Son Durak'ta oo ku yaala dhismaha gawaarida dhulka hoostiisa ah iyo xarigga telefishinka ee dhismaha Metropolitan Mayor Tahir Akyurek, ayaa sheegay in gawaarida la dhisay si loogu daro esteemka. Dhamaan dhererka dhererka 6 kilomitir 427 ayaa dhirbaaxay gabi ahaanba burburay madaxweyne Akyurek, "Meram Son Durak, ka dib dhismaha cusub ee baabuurta la dhigto, xarumaha tareenka, goobaha ganacsiga iyo dalxiiska ayaa la shaqayn doona wejiyad kale," ayuu yidhi.
Duqa magaalada caasimadda ah ee Tahir Akyürek, oo ah magaalada ugu muhiimsan ee madadaalada iyo dalxiiska ee Meram Son Durak'ta oo ku yaala dhismaha gawaarida dhulka hoostiisa iyo dhismaha xarumaha tareenada ee cable ayaa la baaray.
Duqa magaalada Merka Sonkak Durak ayaa sii kordhaya baahida loo qabo dayactirka baabuurta ee magaalada Merka Sonkak, sida uu sheegay duqa magaalada Akyürek. Meelaha uu ku yaalay Dugsiga Hore ee Shukru Doruk oo ku yaala aaga iyo aaggaga aan ka helnay malaayiin dheeraad ah, waxaan hadda diyaarineynaa meel weyn oo baabuurta la dhigto oo loogu talagalay gobolka Meram oo leh dabaqyada 3. Gawaarideena baabuurta oo leh qiyaastii gaadiidka 700 ayaa sidoo kale loo sameeyay si waafaqsan dib-u-dhiska Meram, saldhigga Meram, dhismaha dhismaha iyo dhererka dhismaha ee gobolka. "
Isagoo carrabka ku adkeynaya in shaqadu ay ku darayso quruxda gobolka, ayuu yiri duqa Akyürek, "Isla markaa, waxaan sidoo kale ka shaqeyneynaa gobolka Tavus Baba iyo meelo kale oo ka mid ah joogsiga joogtada ah. Waxaan leenahay meelo la wareegay. Waxaa jira meelo aan go'aaminnay in aan gaarno bannaanka iyo dhulka. Waxaan rajeynayaa Meram Sonak in uu ka shaqeyn doono 2018 iyada oo wejiga gabi ahaanba ka duwan yahay goobta baabuurta la dhigto, xarunta baabuurta telefishanka, goobaha ganacsiga iyo dalxiiska. Gawaarida nooca loo yaqaan 'multi-park car park' ayaa sidoo kale u adeegi karta saldhigga telefishinka. Meram Tavus Baba Cable Line ayaa laga bilaabi doonaa halkan. Kuwa ka baxa gaariga goobta baabuurta la dhigto waxay gaari doonaan Gumus Tepe, Tavus Baba iyo gobollo kala duwan oo ay ka mid yihiin baabuurta fiilooyinka. Maqnaanshaha ayaa hadda socda. Waqtigaan, dhismaha qashinka dhulka hoostiisa waa mid aad u ballaaran. Dhammaan dhererka 6 ayaa ku dhuftay dhererkii dhererka 427 kilomitir.
Gawaarida dhulka hoostiisa ah iyo saldhigga telefishinka ee laga dhisay Magaalada caasimadda ee Konya ayaa ku kacaya qiimaha 21 million pounds.
Jiilaalka Bosnia iyo Herzegovina
Meram Express Airways ayaa la joojiyay
Meram ayaa lagu martiqaaday inuu akhriyo buugaagta meel kasta oo ka timaada Golaha Dhalinyarada
Meram Gödene toki road waddada lagu ruxay
Meram 'stamp' on 2014
Shaqada asphalt ee degmada Meram ayaa sii socota
Degmada Meram waxay labalaabi doontaa shaqooyinka sayniska
Goobaha Basaska waxay ka bilaabeen Isbitaalka Iskuulka Meram
Meram Sonak Durak
Maanta taariikhda: 20 September 1908 Weerarka shaqaalaha tareenada Taariikhda